रअ प्रमुखको भ्रमण र भेट गोप्य राखेर झनै धेरै आशंका बढ्योः कांग्रेस नेता डा. महत – Himalaya Television
२०७७ कार्तिक १६ गते १५:१८
१६ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुखको भ्रमणका के का लागि थियो भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रश्न गर्नुभएको छ ।
हिमालय टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महतले भ्रमणको उद्देश्य गोप्य राखिएकोल झन धेरै शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताउनुभयो । अहिले प्रक्रियाको कुरा मात्रै उठेको तर भ्रमणको उद्देश्य के थियो भन्ने अहिलेसम्म प्रष्ट नभएको महतले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओली देशको भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा अघि बढेको र विदेशी शक्तिको आडमा सत्ता टिकाउन खोजेको महतको आरोप छ । सत्ताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले जोसँग जस्तो सुकै सम्झौता गर्न सक्ने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महतको दावी छ ।
राष्ट्रियताका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दोहोरो चरित्र देखाएको महतको आरोप छ ।
भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँगको भेटका कारण प्रधानमन्त्री ओली अहिले विवादमा हुनुहुन्छ ।
पहिलो गोप्य राख्न खोजिएको भेट सर्वत्र विरोधपछि सार्वजनिक गर्दै गोयल विशेष दूत बनेर आएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रष्टिकरण दिएको थियो ।
काँग्रेस गोप्य डा. महत प्रमुख रअ